Ukupakishwa okusekwe ephepheni kuxhaswe ngabathengi ngegalelo labo kwezendalo | Haishu
Iziphumo zovavanyo olutsha lwaseYurophu zibonisa ukuba ukufakelwa okusekwe ephepheni kuyathandwa ngenxa yokuba zingcono kwindalo, njengoko abathengi besiba nolwazi malunga nokukhetha kwabo ukupakisha.
Uvavanyo lwabathengi base-Europe abangama-5, 900, oluqhutywa ngumkhankaso wecandelo lamaSecala amabini kunye nenkampani ezimeleyo yophando iToluna, bafuna ukuqonda ukukhetha kwabathengi, ukuqonda, kunye nesimo sengqondo sokupakisha.
Abaphenduli bacelwe ukuba bakhethe izinto abazifunayo zokupakisha (iphepha / ikhadibhodi, iglasi, isinyithi, kunye neplastiki) ngokusekwe kwimekobume eli 15 yendalo, esebenzayo kunye nembonakalo.
Phakathi kweempawu ezili-10 zokupakisha iphepha / amakhadibhodi ekhethiweyo, iipesenti ezingama-63 zabathengi bayayikhetha ngenxa yokuba zingcono kwindalo esingqongileyo, iipesenti ezingama-57 kuba kulula ukuziphinda ziphinde zisebenze kwaye i-72% ikhetha iphepha / ikhadibhodi kuba ilikhaya.
Ukupakishwa kweglasi kukhetho olukhethiweyo lwabathengi ekunikezeleni ukhuseleko olungcono lweemveliso (iipesenti ezingama-51), njengokuphinda uguqulwe kwakhona (55%) kunye ne-41% bakhetha ukujonga nokuziva iglasi.
Isimo sengqondo sabathengi malunga nokupakishwa kweplastiki sicacile, ngama-70% abaphenduli abathi bathathe amanyathelo okunciphisa ukupakishwa kweplastiki. Ukupakisha ngeplastikhi nayo kubonwa ngokuchanekileyo ukuba yeyona nto incinci isetyenziselwe ukuphinda isetyenziselwe ukuphinda isebenze, kunye neepesenti ezingama-63 zabathengi bakholelwa ukuba inqanaba lokuphinda lisetyenziselwe ukwenza into ephinde ibe ngaphantsi kwe-40% (iipesenti ezingama-42 zokufakwa kweplastiki ziphinde zenziwa kwiYurophu1).
Olu phando lufumanise ukuba abathengi kulo lonke elaseYurophu bazimisele ukutshintsha indlela abaziphethe ngayo ukuze bathenge ngokuzinzileyo. Iipesenti ezingama-44 zizimisele ukuchitha ngaphezulu kwiimveliso ukuba zipakishwe kwinto ezinzileyo kwaye phantse isiqingatha (48%) siyakuthathela ingqalelo ukunqanda ukuthengisela abathengi ukuba bayakholelwa ekubeni umthengisi akenzi ngokwaneleyo ukunciphisa ukusetyenziswa kwephakheji engaphindwayo.
UJonathan uyaqhubeka, "Abathengi baya baqonda ngakumbi kukhetho lokupakisha kwezinto abazithengayo, ezithi zona zisebenzisa uxinzelelo kumashishini - ngakumbi kuthengiso. Inkcubeko ye'yenza, sebenzisa, lahla' uyatshintsha kancinci."